आशा गरिएकाको प्रतिस्पर्धा :दर्शक कता ? - USNEPALNEWS.COM
आशा गरिएकाको प्रतिस्पर्धा :दर्शक कता ?
आगामी जेठ ३ गते दुई अपेक्षा गरिएका २ फिल्म रिलिजको तयारीमा छन् । दर्शकहरुले वेग्र प्रतिक्षा गरिरहेको ‘जात्रैजात्रा’ अघिल्लो जात्राको सिक्वेलका रुपमा आउँदैछ भने ‘विरविक्रम २’ नाममा २ जोडिएपनि विरविक्रमको कथा भन्दा भिन्न छ ।
प्रचार प्रसारमा दुवै फिल्मले आक्रमक शैली अपनाइरहेका छन् । विरविक्रमले मोफसलका मुख्य शहरका कलाकारहरुलाई उतारेर रोड शो गरिसकेको छ भने जात्रै जात्रा सामाजिक सञ्जालमा आक्रमक बनिरहेको छ ।
‘विर विक्रम २’ लाई मिलन चाम्सले निर्देशन गरेका हुन् भने ‘जात्रै जात्रा’लाई प्रदिप भट्टराईले निर्देशन गरेका हुन् ।
मिलन नेपाली फिल्मको बजारलाई विदेशमा समेत बिस्तार गर्न सफल निर्देशक हुन् ।
बोबी , लिलिविलि , ह्याप्पी डेज जस्ता फिल्महरु विदेशमा छायाँकन मात्रै होइन सफल प्रर्दशन समेत गराइसकेका छन् । प्रदिप लगातार ३ फिल्म हिट बनाएर ह्याट्रिक गर्ने तयारीमा छन् । यसअघि उनि निर्देशित जात्रा , शत्रु गतेले सफल व्यापार गरिसकेका छन् ।
स्टार कास्टको जुधाईका कारण यि दुई फिल्म चर्चामा छन् । नायिकाद्धय वर्षा राउत र वर्षा शिवाकोटीको व्यक्तिगत इगोका कारण प्रतिष्ठाको लडाईंको रुपमा फिल्मको व्यापार जोडिएको छ।
फिल्म एकै साथ जुध्दा फिल्मका कलाकार देखी निर्देशक निर्मातालाई त घाटा छदैं छ । धर्मराइरहेको फिल्म क्षेत्रलाई त्यो भन्दा ठूलो घाटा हुनेछ ।
वर्ष ०७५ को अन्त्यमा रिलिज भएका दुई फिल्मको अवस्था जे थियो जेठ ३ गतेपछि त्यस्तै हुने देखिन्छ । राम्रा फिल्म एकै साथ रिलिज हुदाँ स्वाभाबिक दर्शक बाडिन्छन् ।
केहि दिन अगाडी निर्देशक मिलन चाम्सले विरबिक्रम २ आफ्नो अन्तिम फिल्म भएको भन्दै फेसबुकमा स्टाटस राखे । पछि हटाए । आवेश होस् वा निराशा जे भएपनि एउटा राम्रो निर्देशकले त्यस किसिमको स्टाटस राख्नुपर्ने अवस्था आउनु राम्रो पक्कै होइन ।
फिल्म बनाउनु भन्दा कयौं गुणा गाह्रो काम हो रिलिज मिति र हल पाउनु । एकै मितिमा राम्रा फिल्म जुधाउनुको पछाडी प्रमुख कारण भनेको वितरकहरु विचको प्रतिस्पर्धा नै हो ।
जात्रै जात्रा काठमाण्डौं उपत्यका भित्र स्टेशन फाइभ र बाहिर एफडिले वितरण गर्दैछन् । बिरविक्रम २ लाई सुनिल मानन्धरले वितरण गर्दैछन् ।
पछिल्लो समय काठमाण्डौंमा राम्रो प्रभाव जमाएको स्टेशन फाइभ र देशभरका करिब ८० हलमा पकड रहेको एफडिका अगाडी सुनिल मानन्धरलाई सहज पक्कै छैन ।
दर्शकहरुको प्रतिक्रिया दुवै फिल्म प्रति सकरात्मक छ । दुवै फिल्मले युट्युबमा आफ्नो ट्रेलर , गितहरु सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
विरविक्रम २ मा पल शाह , वर्षा शिवाकोटी , नाजिर हुसेन र वुद्धि तामा मुख्य भुमिकामा छन् भने जात्रैजात्रमा विपिन कार्की , वर्षा राउत रविन्द्र सिहं वानिया र रविन्द्र झा लगायतको मुख्य भुमिका रहेको छ ।
छत्र लकाईद्वारा लिखित मनछुने लघुकथा ‘बिचरा सुनिता’
यूस नेपाल न्युज	 December 29, 2017